क्रोम In ईन्च सेन्टरसेट बाथरूमको नल
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW बाथरूम सेन्टरसेट नल क्रोम
रेटेड 4.965बाहिर आधारित 23 मूल्यांकन ग्राहक
मेटा विवरण: कुनै पनि स्टाइलिश बाथरूमको लागि क्रोम बाथरूम नल। उत्तम मूल्य-गुणस्तर अनुपातको साथ उच्च गुणवत्ता inch इन्च Centeret बाथरूम नल। अब हाम्रो क्रोम बाथरूम नल किन्नुहोस्!
2321200C स्थापना निर्देशन
जे होस् बाथरूम नलको बारेमा धेरै र colorsहरू र फिनिशहरू छन्, चमकदार क्रोम अझै पनि सबैभन्दा लोकप्रिय बाथरूम नल फिनिस हो। त्यो किन हो? मुख्य कारण यो छ कि क्रोम चम्किला छ र यसले कुनै बाथरूमलाई चम्किलो लुक दिन्छ। जब तपाईं आफैंलाई क्रोम बाथरूमको नलमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई यस्तो प्रभाव दिन्छ कि नल र बाथरूम सीटी जत्तिकै स्वच्छ छन्। यो WOWOW को क्रोम बाथरूम नलको लागि पनि गणना गर्दछ। यसको लेआउटको कारणले यसले दुबै शास्त्रीय र स्टाइलिश हेराइ प्रस्तुत गर्दछ। अन्तिम स्थानमा होईन किनकि क्रोम र color्ग र दुई नल ह्याण्डलहरूको बोल्ड डिजाइनको कारण।
क्रोम केन्द्रित बाथरूम नल
र color्ग बाहेक, बाथरूम faucets धेरै विभिन्न शैली र डिजाइन मा आउँछ। तपाईंको बाथरूम सिंकको लागि तीन मुख्य प्रकारका बाथरूम faucets हुन्:
Bathroom सेन्टरसेट बाथरूम faucets
Bathroom व्यापक बाथरूम faucets
Handle एकल ह्यान्डल बाथरूम faucets
दुबै सेन्सेट नलहरू र फ्याड faucets लाई पनि डबल ह्यान्डल बाथरूम faucets को रूपमा लेबल गरिएको छ। Centeret बाथरूम faucets र व्यापक बाथरूम faucets बीच भिन्नता ठूलो छैन। दुबै बाथरूम फाललाई तपाईंको बाथरूम सिink्कमा सही रूपमा स्थापना गर्न तीन प्वालहरू चाहिन्छ। केवल कुरा यो छ कि एक व्यापक बाथरूम नलको ह्यान्डलहरू नलबाट मात्र to देखि १ inch इन्चको दूरीमा लचिलो रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ। Centerset बाथरूम faucets संग, ह्यान्डलहरू पहिले नै एकीकृत बाथरूम सिंक नल देखि inch इन्च मा स्थिति मा छन्। ह्यान्डलहरूले अन्तत: सेन्सेट बाथरूमको नलको एक हिस्सा गठन गर्दछ। यसैले सेन्टरसेट बाथरूमको नल स्थापना गर्नु अलि सजिलो छ, किनकि तपाईसँग कुनै ढीला वाटर पाइपहरू छैनन् किनकि व्यापक बाथरूमको नलको अवस्था छ।
क्रोम बाथरूम नल डिजाइन
WOWOW को क्रोम बाथरूम नल तपाइँको बाथरूम सजावट एक minimalistic र अझै सुन्दर डिजाइन को साथ प्रदान गर्दै। WOWOW को कम चाप क्रोम बाथरूम नल त्यसैले तपाइँको बाथरूम को लागी सबै भन्दा राम्रो स्टाइलिश थप हो। चमकदार क्रोम फिनिशले तपाईंको बाथरूमलाई ऐनामा जस्तै, अत्यधिक चिन्ताजनक चमक प्रदान गर्दछ। आदर्श रूपमा तपाईं यो क्रोम बाथरूम नलसँग मिल्नु हुन्छ समान शैलीमा बाथरूम फालसँग। तपाईको नुहाउने र नुहाउने ट्याबको लागि तपाईले बाथरूममा एक सुसंगत एकतामा पुग्नको लागि WOWOW को मिल्दो क्रोम बाथरूम faucets पाउन सक्नुहुन्छ।
कुनै श doubt्का बिना, यस क्रोम सेन्टरसेट बाथरूम नलको सब भन्दा विशिष्ट अंश दुईवटा ह्यान्डलहरू हुन्। तिनीहरू एक अद्वितीय डिजाइन प्रस्ताव गर्दछ कि तपाईंको बाथरूम एक वाह कारक प्रदान गर्दछ। यी हन्डलहरू मात्र होइन एक आँखा क्याचर। तिनीहरू प्रयोग गर्न पनि धेरै सजिलो छ। यस क्रोम बाथरूम नलमा २-ह्यान्डल डिजाइन समावेश छ जुन ADA- अनुरूप हो। यसले यस क्रोम बाथरूमको नल दुबै टिकाउ र प्रयोगकर्ता-मैत्री बनाउँछ।
उत्तम कार्यात्मक क्रोम बाथरूम नल
यस क्रोम बाथरूम नलको ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ। १२.२ जीपीएम प्रवाह गतिले तपाईलाई पैसा बचाउन पानी बचाउन मद्दत गर्दछ। यसले यस क्रोम बाथरूम नललाई स्थायी र दिगो प्रयोगको लागि मान्यता प्राप्त गर्दछ। यसका साथै, क्रोम बाथरूमको नल पानी र फिंगरप्रिन्ट दाग प्रतिरोधी हुन्छ, त्यसैले WOWOW को क्रोम बाथरूमको नल सफा गर्न धेरै सजिलो छ। तपाइँ तपाइँको स्टाइलिश बाथरूम जहिले पनि जहिले पनि स्पार्कलिंग राख्नुहुनेछ!
उच्च गुणवत्ता क्रोम बाथरूम नल
WOWOW बाथरूम faucets को एक पेशेवर निर्माता हो। हामी आधुनिक उत्पादन टेक्नोलोजीहरूको साथ संयोजनमा बोल्ड डिजाइनहरू प्रयोग गर्दछौं। WOWOW उच्च गुणवत्ताको उत्पादन र विस्तृत गुणवत्ता नियन्त्रणहरूको लागि हो। यस तरिकाले WOWOW सधैं उद्योगको गुणस्तरको आधारमा बाथरूमको नल उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ। WOWOW को क्रोम बाथरूम नल उच्च-टेक चीरा मेशिन र ल्याथस द्वारा प्रशोधन गरिन्छ। त्यसकारण हामी अधिकतम प्रदर्शनको ग्यारेन्टी लिन यस क्रोम बाथरूमको नलको सटीक आयामहरूमा पुग्न सक्छौं। क्रोम बाथरूम नल स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ ताकि अत्यधिक क्षय प्रतिरोधात्मक हुन। वाहको क्रोम बाथरूम नल क्रोमियमको साथ प्लेट गरिएको छ र भित्री भागहरू तपाईंको लागि इष्टतम सुरक्षाको लागि कुनै बाँकी बिना शुद्ध पानीको ग्यारेन्टी गर्न कडा बनाइएको छ।
सहज-स्थापना स्थापना क्रोम बाथरूम नल
क्रोम बाथरूम नल बाथरूम सिंकका लागि डिजाइन गरिएको छ तीन पूर्वानुमानित प्वालहरू जुन एक अर्काबाट inch इन्च टाढा छन्। तपाईको क्रोम बाथरूमको नल तपाईको पूर्वानुमान बाथरूम सिink्कमा निर्बाध फिट हुनेछ। केवल दुई चीजहरू तपाईले गर्न चाहानुहुन्छ क्रोम बाथरूमको नल बाथरुमको सिink्कमा जोडेर जोड्नका लागि दुई समावेश गरिएको प्लास्टिक कुचो पागल। अन्तत: तपाईले पानीपिकाहरू चिसो र तातो पानी कनेक्टरहरूमा जोड्नुहोस्।
WOWOW को यो क्रोम बाथरूम नल ओभरफ्लोसँग स्टाइलिश मिल्दो पप अप ड्रेनको साथ आउँदछ। तपाई सजिलैसँग पप अप ड्रेन स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको नयाँ क्रोम बाथरूम نلको साथ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन। सबै आवश्यक सामानहरू उत्पादसँगै पुर्‍याइन्छन्। स्थापना गाईडको साथ तपाईं सजिलैसँग यो क्रोम बाथरूम नल स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ यसको पप अपको साथ आफैले म्यानुअलको सजीलो-अनुसरण-चरण मार्गनिर्देशन अन्तर्गत आफैलाई निकाल्नुहोस्।
WOWOW ले यसको उत्पादनहरूको गुणस्तरको रूपमा खडा गर्दछ, हामी तपाईंलाई यस उच्च-गुणवत्ता क्रोम बाथरूम नलमा5बर्षे वारंटी प्रस्ताव गर्न डराउँदैनौं। हामीलाई थाहा छ कि हामी धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उच्च गुणवत्ताको उत्पादन प्रस्ताव गर्दछौं। त्यसकारण हामीलाई थाहा छ कि हामी बजारमा सबै भन्दा राम्रो मूल्य-गुणवत्ता अनुपात प्रदान गर्दछौं। यदि हाम्रो क्रोम बाथरूम नलले तपाईको बाथरूमको लागि अपेक्षा गरेको गर्न सक्दैन भने, तपाई हामीलाई बाथरूमको नल फर्काउन सक्नुहुनेछ र हामी यसलाई ब्रान्ड नयाँको साथ बदल्छौं। त्यो जस्तो सरल!
यसका साथै हामी 90 ०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी पनि दिन्छौं। जब तपाईं हाम्रो क्रोम बाथरूम नललाई अर्डर गर्नुहुन्छ र यो तपाईंको बाथरूमको नलले काम गरेको तरिकाले काम गर्दैन, तपाईं हामीलाई कुनै प्रश्न सोधे बिना यो फर्काउन सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि समस्या बिना तपाईंको पैसा फिर्ता गर्नेछौं। हामी हाम्रो उत्पादनमा विश्वास गर्दछौं, र हामी विश्वभर मा धेरै संतुष्ट ग्राहकहरु छन्, हामी जान्दछौं कि तपाइँ WOWOW क्रोम बाथरूम नल संग सकारात्मक आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। ग्यारेन्टी!
संक्षेपमा क्रोम बाथरूम नलका फाइदाहरू:
Y उत्तम चमकदार क्रोम डिजाइन
 ऐना जस्तै, अत्यधिक चिंतनशील चमक
 अन्य क्रोम बाथरूम faucets संग संयोजन गर्न सजिलो
High उच्च गुणवत्ता स्टेनलेस स्टील को बनेको
Install स्थापना गर्न सजिलो
SKU: 2321200C विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: स्नानगृह सिंक नल, कम चाप, पॉलिश क्रोम
9.17 x 9.09 x 3.98 इन्च
Hole होल inch इन्च केन्द्रित डिजाइन बाथरूम मिक्सर ट्याप
तातो पानी र चिसो पानी अलग नियन्त्रण
NSF सिरेमिक डिस्क भल्भ, मिक्स पानी,--होल in इन। Centeret डिजाइन, स्थापना गर्न सजिलो, २ ह्याण्डल कन्ट्रोल तातो र चिसो पानी, क्रोम
नल * १, स्थापना विशिष्टता * १, निकास सभा * १
आर *** y2020-06-13
यो सानो बाथरूम भ्यानिटीको लागि उत्कृष्ट दृश्य हो। पप-अप ड्रेनलाई नजिक प्रेम गर्नुहोस् र गुणस्तर उत्कृष्ट छ।
आर *** y2020-06-18
पैसाको लागि उत्कृष्ट। वास्तवमै राम्रो गुण र अरूको आधा मूल्य को लागी। १००% फेरि खरीद गर्दछ र सायद हाम्रो अन्य बाथरूमहरूको लागि!
जी *** डी2020-06-19
मेरो श्रीमान् र म केहि बाथरूम मर्मतसम्भार गर्दै थियौं र घर सुधार स्टोरहरूमा चयन र मूल्यको अभाव थियो। म यस नलको साथ गएकोमा म खुसी छु। यो सबै चीजको साथ आएको थियो, प्याकेजि love राम्रो थियो, र तपाइँ मूल्यलाई हराउन सक्नुहुन्न। पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट
यस मूल्यको लागि सुन्दर नल र अमेजिंग मान! मन पराउँछु!
जी *** s2020-06-25
मलाई यो यति मनपर्‍यो कि मैले दोस्रो खरीद गरें। उच्च गुण भाग र प्याकेजि,, राम्रो देखिन्छ, राम्रो काम गर्दछ। अत्यधिक सिफारिश गरिएको।
राम्रो, व्यावहारिक, स्थापना गर्न सजिलो, र पैसाको लागि ठूलो मूल्य! हामीलाई हाम्रो बाथरूममा एक प्रतिस्थापन नलको आवश्यकता पर्‍यो र पैसा खर्च गर्ने कुरा आउँदा म तंगै छु g बार्गेन शपर यहाँ} यो हाम्रोलागि एक उत्तम नल हो र केवल उत्कृष्ट काम गर्दैछ!
J *** n2020-07-02
मैले यी मध्ये दुई मेरो आमाको घरको लागि किनेको छु र उनीहरू साँच्चिकै राम्रो देखिन्छन् र उनीहरू अहिलेसम्म राम्रो गरिरहेछन्। तिनीहरू मूल्य को लागी एक महान मूल्य हो र धेरै राम्रो देखिन्छ।
S *** m2020-07-09
नल ठूलो मूल्य हो। यो नयाँ पानी hoses र सबै आवश्यक हार्डवेयर संग आयो। । उत्तम फिट र समस्याहरू होइन। यो फिट छ र फिनिश केही डेल्टा वा मोवेन उत्पादनहरू भन्दा १/ 1rd मूल्यमा राम्रो छ। यो सम्झौता हराउन सक्दैन
सुन्दर उत्पादन, स्थापना गर्न सजिलो, र पप-अप नाली प्रणालीको साथ, हामी अझ खुशी हुन सक्दैनौं! तपाईले के बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्नेमा यत्तिको गर्व लिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईंको प्याकेजि absolutely बिल्कुल बीमा दिन्छ कि सबै कुरा सुरक्षित र सुरक्षित आउनेछ, र यस विवरणमा तपाईंको ध्यान तपाईंको शानदार उत्पादनको रूपमा प्रभावशाली छ! राम्रो, गुणस्तरीय कार्य जारी राख्नुहोस्!
मैले चुहाउने नल बदल्न आवश्यक थियो र यो एउटा कारण किन्यो किनकि यो मसँग मिल्दो देखियो। मूल्य को लागी यो एक महान मूल्य हो। राम्रो देखिन्छ। केवल केही हप्ताको लागि थियो। आशा छ कि यो केहि समय को लागी काम गरीरहेछ।
मूल्यको लागि यो ठोस सानो इकाई हो। ब्रेडेड स्टेनलेस पानी लाइनहरू समावेश गर्दछ ताकि मलाई हार्डवेयर स्टोरको लागि यात्रा बचत ग some्यो र केही $। पुरानो नल हटाए पछि स्थापना एक हावा थियो। म मूल्यलाई उत्पादनहरू मूल्या rate्कन गर्दछु र मेरो विचारमा यो मूल्यको लागि राम्रो मूल्य हो। हामी केवल नालीमा स्टेनलेस स्ट्र्रेनर प्रयोग गर्दछौं ताकि मैले प्रदान गरिएको ड्रेन असेंबली स्थापना गरेन। सबैमा म अर्को WOWOW उत्पादन खरीद गर्ने थिए।
पी *** एल2020-07-21
शीर्ष डलर नल जस्तो देखिन्छ र प्रदर्शन गर्छ यो साँच्चिकै मनपर्दछ।
आश्चर्यजनक उत्पादन। मसँग धेरै डूबहरू स्थापना भएका छन् र यो उत्तम देखिन्छ र म आफैंलाई स्थापना गर्न एकदम सजिलो लाग्थ्यो
एक राम्रो मूल्य मा राम्रो लग नल। भारी बनाइएको र स्थापना गर्न सजिलो
धेरै कृपया सजिलो स्थापना। ब्रश निकल फिनिश प्रेम।
मैले यो मेरो भाँडा घरमा स्थापित गरें र मेरो भाँडाकुँडाको नल, घाँटीको उचाई र यसको कामकाजबाट धेरै खुशी भए।
मेरो नयाँ नललाई प्रेम गर्नुहोस्। वास्तवमै राम्रोसँग प्याकेज भएको र स्थापना सजिलो भएको थियो। राम्रो देखिन्छ र बाथरूमलाई एक अपडेटेड लुक दिन्छ।
बाथरूममा राम्रो फिनिश स्थापना र थप्न सजिलो छ। प्लन्गर स्ट्यापर पुरानो शैली भन्दा धेरै राम्रो छ जुन कहिले पनि सहि रूपमा काम गरेन।
धेरै राम्रो, वर्णन गरिए अनुसार। धेरै राम्रो पुश लक ड्रेन प्लग। त्यो पहिले कहिल्यै देखेको थिएन तर माया गर्छु !!
म *** ई2020-08-08
मूल्य बिन्दुको लागि ठूलो नल, विशेष गरी जब तपाइँ उही मूल्यको लागि होम डिपोको मनपर्दोमा प्राप्त गर्नुहुन्छ तुलनाको तुलनामा।
O *** a2020-08-11
राम्रो गुण, राम्रो समाप्त। यो केहि महिनामा भएको छ र wellvvvv समात्दै छ
नलमा सामेल जस्तो पप अप कहिले पनि थिएन। मलाई जे होस् वास्तवमा यस्तो देखिन्छ। यो सफाईको लागि पनि चाँडै हटाईन्छ। पैसाको लागी एक राम्रो नल।
यस नललाई माया गर्नुहोस्। तातो पानी चाँडो पछि पुरानो नल बाहिर आउँछ। स्थापना गर्न सजिलो थियो।